Sonata77010PP04 အမျိုးသားဝတ် လက်ပတ်နာရီ - အနက်ရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S L'oreal ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ တက်ဘလက်များ iPadများ ၈လက်မနှင့်အထက် ၈လက်မအောက် TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ ကလေးများအတွက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးအဆောင်များ အခြားကလေးသုံး ပစ္စည်းများ ကစားစရာများ Hand Fidget Spinners TOP BRANDS NUBY Mamy Poko စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး အားကစား စကိတ်ဘုတ်များ ပြင်ပအားကစား ဘတ်စကတ်ဘော ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားပစ္စည်းအကြီးများ အားကစားပစ္စည်းအသေးများ အားကစားအ၀တ်အထည်များ အားကစားအသုံးပြုပစ္စည်းများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ ဖက်ရှင် အမျိုးသားများ အတွက် အမျိုးသားအသုံးအဆောင်များ နာရီများ ဒီဂျစ်တယ်နာရီများ နာရီကြိုးအမျိုးအစား အခြားကြိုးများ Sonata 77010PP04 အမျိုးသားဝတ် လက်ပတ်နာရီ - အနက်ရောင် Sonata 77010PP04 အမျိုးသားဝတ် လက်ပတ်နာရီ - အနက်ရောင်By Sonata (2) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > Ks 48,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ NXT9_Titan ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-7ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ အာမခံချက် ပစ္စည်းအာမခံ အကြောင်းဖတ်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ One Year ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်အမ်းငွေရယူခြင်း5မှတ် (2)4 မှတ် (0)3 မှတ် (0)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 52 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် အမျိုးအစား ခွဲခြားရန် ပြုလုပ်သည့် နေ့စွဲ အမှတ်ပေးချက်အများဆုံး အဆိုးဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်အားလုံးBryiam2016 ဒီဇငျဘာ 16 SonataIt'sagood watch ! နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်ထက်ကျော်သူ2016 ဩဂုတျ 17 Sonata နာရီလူငယ်ဆန်ပြီးအရမ်းမိုက်တယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် Titan ကုမ္ပဏီသည် နောင်ခေတ်စားလာမည့် quartz နည်းပညာကို နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းအသွင်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းကာ အိန္ဒိယနာရီဈေးကွက်ကို အပြောင်းအလဲအကြီးတစ်ခုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ Titan ကုမ္ပဏီသည် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်နာရီများပြုလုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့ပဉ္စမအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ "Titan" အမည်ဖြင့်နာရီများကိုသာမက လွန်ခဲ့သောနှစ်အတန်ငယ်က "Tanishq" အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်လည်း လက်ဝတ်ရတနာများ ပြုလုပ်ရောင်းချလျက်ရှိရာ ယခုအခါအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုလုံးဖြင့် အိန္ဒိယတွင်လူအသိများဆုံးနှင့်လူအကြိုက်များဆုံးဖြစ်လျက်ရှိသည်။၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် တမီးစီးပွားရေးအုပ်စုကြီးနှင့် တမီးနာဒူးစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ပေါင်းစည်းမိရာမှ Titan အမှတ်တံဆိပ်မှာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားအောင်မြင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ "Titan quartz" နာရီများကို သမရိုးကျဒီဇိုင်းများမှကွဲကာ နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းအသွင်းများဖြင့် ချပြပြီး အိန္ဒိယနာရီဈေးကွက်လောကကြီးကို Titan ကုမ္ပဏီမှပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး လုပ်ဆောင်ချက်စုံလင်ကာ စတိုင်ကျနလှပသည့်ဒီဇိုင်းတို့ဖြင့် လူကြိုက်များလှသည့် Sonata အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် Titan ကုမ္ပဏီမှ မိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက် လူငယ်များအကြားရေပန်းစားစေမည့် ခေတ်မီကြောမော့သည့်ဒီဇိုင်းတို့ဖြင့် Fastrack အမှတ်တံဆိပ်ကို တတိယအကြိမ်အမြောက် တစ်ဖန်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကမ္ဘာအနှံ့ နာရီအလုံးပေါင်း ၁၅၀ သိန်းပေါင်းရောင်းချပြီးဖြစ်ကာ နှစ်စဉ်နှင့်အမျှလည်း နာရီအလုံးပေါင်း ၁၅ သန်းထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။Titan အမှတ်တံဆိပ်သည် အသစ်အသစ်သော နည်းပညာများနှင့် ဆန်းသစ်သောတီထွင်မှုများကို အစဉ်အမြဲဖော်ထုတ် ချပြလျက်ရှိသောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နာမည်အကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုအဖြစ် လူသိများကျော်ကြားသည်။ ခိုင်ခံမှု၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် အခြားဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာတို့တွင် ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်သည့်အတွက် နှစ်ပေါင်း ၂၅နှစ်ကျော်ကြာ သူမတူအောင် ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် ဈေးကွက်တွင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆန်းသစ်လှပပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်သည့် နာရီဒီဇိုင်းများဖြစ်သည့်အပြင် နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် မည်သည့်အခါမှ ရိုးမသွားသည့် အရည်အသွေးမြင့်နာရီများဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ကျော်မှ ၀ယ်ယူအားပေးသူများကြောင့် ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရောင်းအားကောင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့်သည့်နာရီများအဖြစ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလျက်ရှိသည်။Titan အပါအ၀င် Fastrack, Sonata နှင့် Xylys အမှတ်တံဆိပ်လေးမျိုးမှာ ဈေးကွက်တွင် နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။ Titan အမှတ်တံဆိပ်မှာ အလတ်တန်းစားနှုန်းထားနှင့် ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးကို အဓိကထားထုတ်လုပ်ထားပြီး Fastrack အမှတ်တံဆိပ် နာရီများမှာ ခေတ်မီခြင်းနှင့် နုနယ်ပျိုမျစ်မှုကို ထင်ဟပ်စေသော နာရီများဖြစ်သည်။ Sonata အမှတ်တံဆိပ်သည် ဈေးကွက်တွင် နာရီဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးကို အလုံးရေများစွာ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး Xylys အမှတ်တံဆိပ်နာရီများမှာ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိ နာရီများအဖြစ်ဈေးကွက်တွင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြား လူကြိုက်များလျက်ရှိသည်။ ပြောင်မြောက်သော အနုပညာတစ်ရပ်ကို ဖော်ကျူးထားသည့် Titan အမှတ်တံဆိပ်မှ အခြားသော တံဆိပ်အခွဲများကိုလည်း ဈေးကွက်တွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလျက်ရှိသည်။ Titan အပါအ၀င် အခြားတံဆိပ်ခွဲပေါင်းများစွာသည် ယခုအချိန်တွင် လူကြိုက်အများဆုံး အမှတ်တံဆိပ်များအဖြစ် ဈေးကွက်တွင် ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ Titan မှ ထင်ရှားသော collection အခွဲများမှာ Titan Edge, Titan Raga, Nebula, Zoop, Orion, Purple, Obaku, Automatic, Tycoon, Bandhan, Octane နှင့် HTSE series တို့ဖြစ်သည်။အဓိက အကြောင်းအရာများOne Year Official WarrantyFunction: DigitalGender: MenStrap Colour: BlackDial Shape: RoundStrap: RubberWater Resistance: 100MCountry of Origin: IndiaAdditional shipping fees will be charged.ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် 77010PP04 အမျိုးသားဝတ် လက်ပတ်နာရီ - အနက်ရောင် SKUSO085FA0FMVW0NAFAMZ မော်ဒယ်လ်77010PP04 Weight (kg)0.2 ColourBlack Product warrantyOne Year ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်ခြင်း